Wasiirka Dekadaha Puntland oo ka qayb galay shir Caalami ah oo ka dhacay dalka Cyprus
Cyprus :-Wasiirka Dekadaha ee Dowlada Puntland Eng. Siciid Maxamad Raage ayaa waxaa uu ka qeyb galay shir caalami ah oo ay ka soo qeyb galeen 175 dowladood waxaana shirkaas uu ka dhacay magaalada Larnaca ee dalka Cyprus .
Shirka ayaa waxaa looga hadlay diiradana lagu saaray la dagaalanka kooxaha burcad badeedka iyo sidii garab loo siin lahaa dowladaha ay dhibta ku hayaan kooxaha isbaarada dhigta bada ee loo yaqaan (Burcadbadeeda ).
Eng. Siciid Maxamad Raage ayaa kulanka waxaa uu uga qeyb galay Soomaaliya wuxuuna ka hadlay dhibaatada Burcad Badeeda ay ku heyso xeebaha Soomaaliya.
Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka bada Puntland Eng. Siciid Maxamad Raage ayaa waxaa kale oo uu Khudbad ka jeediyey shirka ka dhacay magaalada Larnaca ee dalka Cyprus wuxuuna ka warbixiyey dhibaatada burcad badeeda ay ku heysay xeebaha Puntland iyo sida ay dowladiisa ula dagaalantay wuxuuna sheegay in ay yaraadeen afduubkii ay maraakiibta u geysan jireen kooxaha Burcad Badeeda.